Tsy fandriampahalemana : mihorohoro amin’ny asan-jiolahy ny distrikan’Andramasina | NewsMada
Tsy fandriampahalemana : mihorohoro amin’ny asan-jiolahy ny distrikan’Andramasina
Miverina indray ny tsy fandriampahalemana sy ny tsy filaminana any amin’ny distrikan’Andramasina. Tato anatin’ny andro vitsivitsy, mihorohoro ny mponina amin’ny fanahiana asan-jiolahy. Niseho izany, afakomaly niainga amin’ny alalan’ny andian’olona naka an-keriny kamiao tao anelanelan’ny kaominina Ambatofavalo, Atsimondrano sy ny kaominina Mandrosoa, Andramasina. “Araka ny fampitam-baovao voaraiko, andian’olona 14 izy ireo ary ahina mety nitondra fitaovam-piadiana”, hoy ny ben’ny Tanànan’Alarobia Vatosola, Andramasina. Mifamahofaho tanteraka ny vaovao. Nambarany araka ny fitantaran’ny mponina ao Ambatofahavalo fa nisy andiana olona nandeha fiara 4×4 fotsy miisa roa nandalo tao an-tanànan’izy ireo.
Fakana an-keriny kamiao
Mpamily anefa sisa hitan’izy ireo rehefa niverina ilay fiara ny hariva. “Tsy fantatra ny nalehan’ireo olona maromaro tao anatiny. Mbola miambina ny mponina amin’izao fotoana izao” , araka ny fitantarany ihany. Mifandray amin’ilay ambara fa fakana an-keriny ilay kamiao ve izany ? Na izany aza, nampandre izany vaovao rehetra izany amin’ireo tobin-janaparitry ny zandary akaiky azy ity ben’ny Tanàna ity. Anisan’izany ny any amin’ny fokontany Antovontany, Alarobia Vatosola ary nampita izany amin’ny zandary namany manerana ny distrikan’Andramasina indray izy ireo avy eo. Teo koa ny fidiran’ny mponina an-telefaonina amin’ny onjampeo Kolo TV nitantara izany vaovao izany.
Efa nisy fanafihana tao Antsahakely Mangabe…
Nanamafy ireo vaovao ireo ao amin’ny tambajotran-tseraserany ny ben’ny Tanànan’Alarobia Vatosola, fantatry ny maro amin’ny anarana “Bina”. Tsiahivina fa nialoha izao tranga mampiahiahy ny mponina any amin’iny faritra iny izao, efa nisy koa andiana jiolahy nikasa hanafika ao Ambodirina Antsahakely Mangabe, kaominina Sabotsy Manjakavahoaka ny herinandro teo. Tsy misy tobin-jana-paritry ny zandary rahateo any an-toerana fa any Mandrosoa. ..Araka izany, mailo tanteraka ny mponina any an-toerana amin’izao fotoana izao ary miantso vonjy amin’ny tompon’andraikitra. Na izany aza anefa, mety ho mifandray tendro amin’ny ao an-tanàna ihany ny olon-dratsy ka tokony hanara-maso izany ny mponina.